Allocadia: Wulite, Soro, ma Tụọ Atụmatụ Mgbasa Ozi Gị na Nnukwu Obi ntụkwasị obi na njikwa | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 28, 2017 Na Mọnde, Nọmba 28, 2017 Jeff Epstein
Mgbagwojuwanye anya na nrụgide na-arị elu iji gosipụta mmetụta bụ naanị ihe abụọ mere ahịa ji bụrụ ihe ịma aka taa karịa ka ọ dị na mbụ. Njikọ nke ọwa ndị ọzọ dịnụ, ndị ahịa ịmara nke ọma, mmụba nke data, na mkpa ọ bụla iji gosipụta onyinye na ego na ebumnuche ndị ọzọ emeela ka nrụgide na-arịwanye elu nye ndị na-ere ahịa ka ha bụrụ ndị na-eche echiche na ndị nlekọta ka mma nke mmefu ego ha. Mana ọ bụrụhaala na ha ka na-agba mbọ ịdebe ya niile na mpempe akwụkwọ, ha agaghị emeri nsogbu ndị a. O di nwute, nke ahụ bụ ọnọdụ maka ya 80% nke otu dị ka nyocha anyị mere na nso nso a.
Allocadia Marketing arụmọrụ Management Ngwọta Isi
Tinye Allocadia, Ihe ngwanrọ oru nlekota oru ngwangwa nke ndi ahia ahia, maka ndi ahia, nke n’enye uzo di nma iji wulite atumatu ahia, jikwaa itinye ego, ma gua ihe banyere ulo oru. Allocadia na-ewepu atụmatụ na atụmatụ mmefu ego niile ma na-ewepụta ezigbo oge iji mee ọnọdụ ROI na azụmaahịa ya. Site na inyere ndị na-ere ahịa aka Runre ahịa nke ọma, Allocadia na-enyekwara ndị na-ere ahịa aka ịre ahịa nke ọma.
Ulo elu nke Allocadia weputara isi ato: nhazi, ntinye ego na nyocha.
Na-eme atụmatụ na Allocadia
Ka anyị bido n’atụmatụ ị na-eme kwa afọ. Allocadia na-edozi usoro na ụtụ isi maka otu gị na ndị otu gị ga-esi wuo atụmatụ ahịa gị. Ma ọ bụ nke ọdịdị ala, ngalaba azụmahịa, ngwaahịa, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị a dị n'elu ahaziri, usoro mgbanwe Allocadia ga-egosipụta otu ịchọrọ ileba anya na azụmaahịa gị. Nanị mepụta usoro ịchọrọ ịchọrọ, wee ekenye ndị gụrụ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ. Nke a gụnyere ọkara mbụ nke atụmatụ gị, ma na-enye ndị na-ahụ maka mmefu ego ụzọ ha ga-esi kesaa ego ha site na ala ruo ọkara nke abụọ, n'ụzọ kwekọrọ na itinye ego na usoro ụzọ dị mkpa.
Na onye ọ bụla na-eji otu usoro, na-eso otu mgbakọ aha, ma na-akpọkwa ihe n'ụzọ dị mkpa, ugbu a ị ga-enwe ike iwepụta atụmatụ niile dị n'okpuru na otu echiche zuru oke, nhazi usoro. You'll ga-enwe ike ihu mgbe na ebe mmemme gị niile ga-ada, ego ole ha ga-eri, yana ihe ịtụ anya na ego ga-adị.
Itinye ego na Allocadia
Ozugbo oge enyere aka na-aga n'ihu, ndị na-ere ahịa ga-amata ebe ha kwụ na mmefu na mmefu ego dịnụ ka ha wee mara ụlọ ole ha ga-edozi ma gbanwee. Mana ọ bụrụ na ha dabere na otu ndị na - eme ihe iji nweta ha ozi a, ha nwere ike ichere ogologo oge ma ọ bụ na ha agaghị enweta data ha chọrọ na usoro ziri ezi. Nke ahụ bụ n'ihi na Ego na-ele ụwa anya na akaụntụ GL, ọ bụghị mmemme ma ọ bụ ihe omume dị ka ndị ahịa na-eme.
Allocadia na-edozi nsogbu a site na ịbubata ma depụta akwụkwọ ọnụahịa data na-akpaghị aka site na Ego gaa usoro ziri ezi na mmefu ego na Allocadia ka ndị ahịa wee nwee ike ịhụ ihe ha mefuru, ihe ha zubere imefu, na ihe ha hapụrụ iji nọrọ. Ugbu a, ha nwere ike ịdị njikere maka ohere ka ha bilitere, na-enweghị nchegbu gbasara ịgafe ma ọ bụ n'okpuru mmefu ego. N'ihi na ozugbo oge ahụ gwụrụ, na-ebufu mmefu ego na-ejighị n'aka na-apụkarị na tebụl.
Ihe nchoputa ya na Allocadia
Nzọụkwụ ikpeazụ dị n'okporo ụzọ ROI na-abụkarị nke siri ike. Inwe ike ijikọ pipeline na ego ị ga-enweta na azụmaahịa na mgbasa ozi bụ nchụso siri ike - tupu Allocadia. Site na ijikọ data CRM ozugbo iji debe ihe dị na Allocadia, anyị na-eme ka ọ dị mfe ijikọ ntụpọ n'etiti itinye ego gị na mmetụta ha na-anya. Ugbu a ị nwere ike ịnwe mkparịta ụka na Marketing ROI, ma gosipụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ihe ị na-eme na-agbagha ezigbo, mmetụta a na-atụnyere na azụmahịa. Site na iji akara ngosi siri ike na nkọwapụta ihe na ROI site na ebumnobi, a ga-akacha gị mma ikpebi ebe ị ga-eji dollar ahịa gị ọzọ
Gbaa Marketingzụ ahịa Mma ka I wee nwee ike Dozụ ahịa ka mma
Site na ntinye ihe eji eme ego iji nweta ihe atumatu na nkpado nghazi, Allocadia gunyere ikike di iche iche iji nyere gi aka igba ahia site n’inwe mgbatị, nkwekọ na amụma. Ọ ga - azọpụta gị oge na mbọ iji mee atụmatụ na itinye ego na yabụ ka ị nwee ike lekwasịkwu anya n ’ịchepụta na ime mkpọsa ngwa ahịa na-eme ka nsonaazụ kacha mma.
Allocadia site na nọmba *:
Nkezi oge echekwara na atụmatụ na ịhazi atụmatụ: 40-70%
Ọnụ ọgụgụ nke itinye ego na-emezighị emezi emezi: 5-15%
Mmezi net na Marketing ROI: 50-150%
Oge ịkwụghachi ụgwọ na itinye ego nke Allocadia: N'okpuru ọnwa 9
* Ka ndị ahịa Allocadia si kọọ
Perkpụrụ Omume Arụ Ọrụ Kachasị Mma
Chọpụta arụmọrụ ahịa gị bụ njem site na ọkwa ise nke ntozu okè. Anyị achịkọtala usoro ndị a ma jiri nlezianya kọwaa otu esi aga n'ihu na ọkwa ọ bụla na nke anyị Arụ Ọrụ Matkpụrụ Ntozu Ahia. N'ime ya ị ga-amụta ịmata ebe ị nọ taa, yana ihe ịkwesịrị ime iji nwee ọganihu n'ọkwa ọzọ.
Nke a bụ ihe echiche ahụ dị site n'elu:
Guzosie ike a Centerlọ Ọrụ Ahịa nke Mara Mma nke na-adọta, na-azụ, ma na-ejigide onyinye kacha mma na azụmaahịa ahụ, gụnyere ndị nwere data siri ike na ike nyocha.
Jikọọ mgbalị gị na ndị nọ na Ahịa na Ego, ruo n'ókè ebe Ego bụ onye ndụmọdụ a tụkwasịrị obi na Ahịa na-aghọta otú na ebe Marketing na-enye aka na akara elu.
Mee ka o doo anya, enwere ike inweta, Ebumnuche SMART na ọkwa ọ bụla nke nzukọ Ahịa, na dochie metrik 'ihe efu' dị ka ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ na email ga-eji usoro siri ike dị ka ọnụ ahịa-kwa-ụzọ, onyinye pipeline, na ROI.
Kpochapu data silos, tozuru oke na taxonomy na nhazi, ma guzobe otu isi iyi nke eziokwu maka itinye ego na mmetụta. Jikọta data gị maka ihe ị ga-eme.
Gbanye ego teknụzụ ahịa ahịa nke na-eji ngwa ọrụ agbakwunyere kachasị ọhụrụ, yana map doro anya nke ebe ịchọrọ iji akara gị na-aga ka azụmahịa ahụ na-abawanye. Na isi ga-abụ CRM gị, akpaaka ahịa, na MPM ngwọta.
Chọrọ ịma otu ị si agbakọ na Model Performance Maturity Model? Were nyocha nyocha anyị ma tụlee nsonaazụ gị karịa ndị ahịa 300 ndị ọzọ gburugburu ụwa!
Were Nyocha Nyocha Azụmaahịa
Allocadia na-elekọta ụlọ ọrụ B2B gafee ọtụtụ ngalaba gụnyere Technology, Finance & Banking, Manufacturing, Business Services, na Travel & Hospitality. Ezigbo onye ahịa profaịlụ nwere otu ndị ahịa 25 ma ọ bụ karịa na / ma ọ bụ usoro mgbagwoju anya, usoro ịzụ ahịa ọtụtụ ọwa na-agbasasị ọtụtụ mpaghara, ngwaahịa, ma ọ bụ ngalaba azụmaahịa.
Arụ Ọrụ Caserụ Ọrụ Nhazi Azụmaahịa - Allocadia
Serviceszụ ahịa ọrụ ego na-eme ngwa ngwa ma na asọmpi oke, ọkachasị mgbe ị na-ejere ahịa ahịa. Na Charles Schwab, nke a sụgharịrị ka ọ bụrụ nnukwu mmefu ego na nnukwu mmiri na-etinyekarị ego yana ihe karịrị 95 ego. Iji mee ka okwu sikwuo ike, ndị otu na Charles Schwab na-ejide onwe ha n'ụkpụrụ dị oke elu, na-achọ inweta ihe -2% na + 0.5% nke mmefu ego.
Allocadia nyeere nnukwu ìgwè ndị ahịa a aka ka ha pụọ ​​na mpempe akwụkwọ ma mee ka ahịa ha na-emefu n'otu usoro, usoro ahaziri ahazi nke chebere mkpa ha ịdị na-agbanwe ma na-anabata mgbanwe. Site n'inwe usoro mmefu ego dị mfe karị, ọfụma na ọhụhụ ka mma n'ime itinye ego, ndị na-ere ahịa na Charles Schwab bụ ndị nlekọta kachasị mma nke mmefu ego azụmaahịa na ndị na-akọ akụkọ ka mma banyere mmetụta ha na azụmahịa.
Danloduo Ọmụmụ Ihe
Ise Nzọụkwụ iji na-eto Arụ Ọrụ Gị
Tags: allocadiaomume kacha mmadashboard ahiaahia kacha mmaebumnuche ahiaarụmọrụ ahịanjikwa arụmọrụ ahịapipeline ahiaahia ahiaatụmatụ ire ahịateknụzụ ahịa ahịamartech tojupụtaraahịa tụrụ atụmpmsmart
Inyere otu ahia ahia kacha elu n 'uwa ka bawanye onu ahia ma nyefee ndi ahia ha uru Allocadia Perrụ Ọrụ Azụmaahịa Azụmaahịa, atụmatụ kachasị ike n'ụwa, ịhazi atụmatụ, na njikwa njikwa arụmọrụ.